Humboldt ma ọ bụ Peruvian ugbu a, gịnị ka ọ bụ? | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihu igwe nke South America dị iche iche n'ihi ọnọdụ ala, ikuku na oké osimiri. N'okwu a kapịrị ọnụ nke Chile na Peru, oke osimiri dị mkpa n'ihi ihe a na-akpọ Humboldt ugbu a.
Ma, Kedu ebe ọ si wee nwee mmetụta dị iche na ihu igwe? Anyị ga-ekwu maka ihe a niile na ọtụtụ ndị ọzọ pụrụ iche.
1 Kedu ihe iyi Humboldt?
2 Mmetụta na ihu igwe
3 Mgbanwe ihu igwe ọ na-emetụta oge Humboldt?
Kedu ihe iyi Humboldt?
Nke a dị ugbu a, nke a makwaara dị ka nke Peruvian ugbu a, Ọ bụ mmiri dị ugbu a site na ịrị elu nke mmiri miri emi ma, ya mere, dị oyi, na-eme na ụsọ ọdịda anyanwụ nke South America. Ọ bụ German naturalist Alexander von Humboldt kọwara ya na ọrụ ya "Njem na mpaghara Equinoctial nke New Continents" nke e bipụtara na 1807.
Ọ bụ ihe kachasị mkpa mmiri iyi na ụwa, nakwa otu n'ime ndị nwere mmetụta ndị ọzọ ama ama na ihu igwe, na nke a, nke ụsọ mmiri nke Chile na Peru n'ihi nsonaazụ njikọ nke mmeghari nke ntụgharị ụwa na ike ikuku nke oke osimiri na mpaghara ikuku.
Mgbe o si na omimi nke ikpere mmiri ahu puta, mmiri ya nwere oke onodu di ala, ihe dika 4 andC, ma gbasaa na mpaghara ugwu site na odida anyanwu South America, dika uzo rue mgbe rutere ugwu nke ekwuru. . N'ihi nke a, okpomọkụ nke mmiri a dị n'etiti 5 na 10ºC dị ala karịa ka o kwesịrị ịdị, na-eburu n'uche ọnọdụ ya na nso ya na equator.
Mmiri oyi na-edozi ahụ nke ọma: kpọmkwem, nwere nnukwu nitrates na phosphates site n'oké osimiri, nke phytoplankton nwere ike iri nri, nke, n'aka nke ya, nwere ike mụta nwa ngwa ngwa wee bụrụ akụkụ nke nri zooplankton, nke ụmụ anụmanụ buru ibu na ụmụ mmadụ ga-eri nri.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ihu igwe, agbanyeghị na ọ bụ ala kpọrọ nkụ na ọzara, n'ihi Humboldt dị ugbu a ụfọdụ osisi siri ike, dịka cacti na ọzara Sonoran, nwere ike ịdị ndụ n'ihi oke mmiri na ụfụ nke zoro ezo n'elu ala.
Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ ọ naghị apụta ugbu a, ifufe dị n’ebe ugwu na-eburu mmiri ọkụ n’ebe ndịda. Mgbe nke a mere, ọkụ na-ekpo ọkụ, nke aha ya bụ El Niño maara, na-anọchi ya na-akpata ịrị elu okpomọkụ nke ihe dịka 10ºC, nke na-egosi mbelata nke osisi na ahịhịa na mmiri, na ihe iyi egwu maka ịdị ndụ nke anụmanụ ndị ahụ na-eri nri na ya, dị ka nnụnụ.
Mmetụta na ihu igwe
Dị ka anyị kwuru, ihu igwe nke ụsọ oké osimiri nke Ebe Ndịda America n'ozuzu ya bụ ala akọrọ, ọzara. N'ihi ohere, ọ kwesịrị ịdị ebe okpomọkụ na okpuru mmiri, mana n'ihi na mmiri ya dị n'agbata 5 na 10ºC dị ala karịa ka ha kwesịrị ịdị, ikuku jụrụ.
Yabụ, kedu ebe kwesịrị ịbụ ebe mmiri na-acha lush na oke okpomọkụ, na mpaghara ndị metụtara kọntaktị a ugbu a anyị na-achọta ọzara mmiri dị n'ụsọ oké osimiri, dị ka Atacama, nke okpomọkụ ya dị n'etiti -25ºC na 50ºC, nke bụkwa nke kachasi ike n'ụwa. N'agbanyeghị na ị nọ nso, mmiri ozuzo dị ụkọ ma ọ bụ naanị osisi na anụmanụ ole na ole ga-adị ndụ.
Ihe atụ ụfọdụ bụ:
Osisi: Ricinus komunis, Shizopetalon tenuifolium, Senecio myriophyllus, Copiapoa
Animales: ọdụm ndị dị n'oké osimiri, nkịta ọhịa, agwọ ogologo ọdụ, nkịta, na-ekpe ekpere mantis, akpị
Mgbanwe ihu igwe ọ na-emetụta oge Humboldt?
O di nwute na ee. Mmiri oyi na mmiri alkaline nwere ikuku oxygen dị elu, ekele nke ọtụtụ anụmanụ nwere ike ibi na ha, mana mmiri nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ deoxygenated nwere ọchịchọ ịgbasa ka okpomọkụ na-arị elu, nke mere na ụfọdụ aghaghị ịgawo ebe ọzọ; Otú ọ dị, ndị ọzọ, dị ka anchovy ndị Peruvian, nwere ihu ọma ma nwee ike ịmụ nwa n'ụzọ nke taa ha bara ụba n'ụgbọ mmiri ịkụ azụ.
Mmiri Peruvian na Chile ha na-agba ume n'ihi okpomoku zuru uwa. N'ihi usoro a, ọbụlagodi ihu igwe nke ụsọ oké osimiri nke South America nwere ike ịgbanwe otu ụbọchị, na-etinye usoro ndụ na ihe egwu.
Na mgbakwunye, ihe El Niño kawanyere njọ ma enwere ndị ọkachamara na-ekwu na, ka ụwa na-ekpo ọkụ, ndutịme oro enye editịbede okpon akan, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na-emetụta ihu igwe na-akpata oke ọkọchị na idei mmiri, mana Ọzọkwa ka ihe ọkụkụ. N'ihi ya, ọnụahịa nri ga-adị oke ọnụ n'ihi na ọ ga-esiri ya ike ịmị.
Ka ọ dị ugbu a, El Niño kachasị njọ bụ na 1997, mana nke 2016 yiri ihe yiri ya. Na mmiri ọkụ, Mmetụta ihu igwe dị ka ajọ ifufe ma ọ bụ oke mmiri ga-akawanye njọ.
You mara Humboldt ugbu a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Humboldt dị ugbu a
daalụ maka enyemaka ESTEBAN
nwere ike dijo
Ana m ekele gị nke ukwuu maka inyere m aka n'ọrụ ụlọ akwụkwọ m na onye nkụzi m nyere m 20
o nyeere m aka nke ukwuu
ihe m choro bu flora na fauna gi site na mmiri humbolt
Achọrọ m ịma ihe ọrụ ya bụ
Mmiri mmiri na-ekesa okpomọkụ na mbara ụwa niile, na nke Humboldt, nke a bụ mmiri oyi na-emetụta ihu igwe dị n'ụsọ mmiri nke Peru na Chile ozugbo, na-eme ka ha debanye aha okpomọkụ dị ala karịa ihe ọ ga-emetụ n'ihi ọnọdụ ya gbasara equator.
Tụkwasị na nke a, n'ihi Humboldt dị ugbu a, ọtụtụ anụmanụ nwere ike ibi ebe ahụ n'ụsọ mmiri nke Peru na Chile, ebe ọ na-eweta ọtụtụ nri. N'ezie, ọ na-enye ihe karịrị 10% nke azụ azụ ụwa.
Ekele dịrị Monica sanchez maka inyere anyị aka rụọ ọrụ ụlọ
Zaghachi florencia gonzales
agụmakwụkwọ ọhụrụ dijo
Ndewo Miss Florencia, ọ ga-amasị m ịmara ebe Peru na Humboldt na-agafe ugbu a. Ana m echere azịza m Biko nyere m aka
esther okwukwo dijo
daalụ maka enyemaka ... na-adọrọ mmasị
Zaghachi esther okwukwa diaz
kedu ebe ọnọdụ nke humboldt dị ugbu a
Zaghachi Andrea Araceli Salas Ayala
Daalụ maka ozi ahụ, ma debe okwu ndị ahụ na-akpasu iwe ...
Achọrọ m ịma ebe humboldt dị ugbu a
Zaghachi carlos alonso
Achoro m ima ka ihe obughi si bawanyesssssssssssssssssssssssssss
ezigbo ekele m niile
Zaghachi Tony Manrique
Victor Guzman na Jossy C dijo
Zaghachi Victor Guzman na Jossy C
Achọrọ m ime bụrụ na idei mmiri 🙂
Zaghachi karen paucar
N'ihe banyere ide mmiri, nọrọ jụụ ma zere osisi, osisi ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya, ka ha nwere ike ịda. A na-atụ aro ka ị ghara iji ụgbọ ala, ma ọ bụ jee ije na mpaghara idei mmiri.
Ga-agbaso ntuziaka nke Nchedo Obodo, ndị uwe ojii na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ide mmiri ahụ dị mkpa, ị ga-agaru ebe o kwere mee ruo mgbe ọnọdụ ahụ dajụrụ.
Alejandra mmụọ ozi dijo
Na-efu, o nwere ike igosi mpaghara ndị ọzọ ọwụwa anyanwụ nke America na Africa Eurasia. metụtara ndị updrafts ,. biko daalụ ..
Zaghachi Alejandra angel
Kedu ebe kachasị emetụta
Ebe kachasị emetụta bụ ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke South America, Ugwu Andes. Mba ndị emetụtara bụ Peru, Bolivia, Chile.
N'ehihie, m na-arụ ọrụ na mmiri mmiri na Peru na mmetụta ha na IKWE, m ga-achọ akwụkwọ ọgụgụ ma ọ bụ mebere nrụtụ aka. Achọrọ m ọbá akwụkwọ nke SM, nke agrarian mana enweghị m ike ịchọta ya, ebee ka m nwere ike ịchọta ozi a? Daalụ n'ọdịnihu.
gini bu ebe?
n nke iyi mmiri iyi
Zaghachi na aja
Na Oke Osimiri Pasifik, na nso Chile na Peru.
Kedu ihe kpatara Humboldt ji agafe ugbu a na Peru Nwada Florencia
Zaghachi nye newademus
Ndewo, m ga-achọ ịma ihe igwe ojii na-amalite site na ọnụnọ nke oke osimiri Peruvian.
Ọ dị mma, ozi a banyere nke dị ugbu a nke Peru nyeere m aka nke ukwuu, ọ bụkwa eziokwu ugbu a na ọdachi na-enweta na Peru na mgbanwe a El Niño, mgbanwe karịrị oke mmiri ozuzo niile (nke na-akpata huaycos) na-abawanye na okpomọkụ.
Olee otu okwukwo mmiri si amasị ndụ mmadụ a? O nwere olile anya na menayuden bu oru nwa m nwoke. Daalụ
Winter solstice ịmata ihe